Aragti – Garanuug
Home / Aragti
March 3, 2017	Aragti 1 4,631
February 13, 2017	Aragti, Qoraallo 0 3,510
February 10, 2017	Aragti, Qoraallo 0 2,277
February 6, 2017	Aragti, Qoraallo 0 3,302
January 12, 2017	Aragti, Falanqayn 0 4,399
January 11, 2017	Aragti, Falanqayn 0 3,640
Maxaa ay dawladuhu u dhintaan, xaddaaraduhu u burburaan ama ummaduhu u baaba’aan? Waa su’aal da’ weyn oo aqoonyahano badani, waqtiyo kala duwan doodo ka dhiibteen. Aqoonyahannada ka hadlay arrintan ee wax ka taabtay waxaa ka mid ahaa caalimkii taariikhyahanka ahaa ee Cabdiraxmaan Ibnu Khalduun (1332 –1406M). Ibnu Khalduun waxa uu ...
January 2, 2016	Aragti 0 6,952
“Soomaalidii baan u dudi, daadufka ahayde” Sayyid Maxamed. Hordhac Sayyid Maxamed (AUN) waxa uu ahaa halyey u halgameyey diintiisa, dadkiisa iyo dalkiisaba. Wuxuuna hadh iyo habeen u taagnaa sidii uu gumaystaha waddanka uga saari lahaa, isaga oo taas uga gol lahaa inuu dadkiisa ka badbaadiyo in diintooda laga bedelo ama ...
October 23, 2015	Aragti 0 4,412
March 30, 2017	202,326